फिफा टिभी रिपोर्टमा नेपाली डकुमेन्ट्री ‘सुनाकली’ (भिडियोसहित) « Channel Np
फिफा टिभी रिपोर्टमा नेपाली डकुमेन्ट्री ‘सुनाकली’ (भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति : Monday, August 22nd, 2016 at 6:01 PM
मुगुकी किशोरीहरुको फुटबल कथामाथि बनेको नेपाली डकुमेण्ट्री सुनकलीले विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)को टिभी रिपोर्टमा पनि स्थान पाएको छ । फिफा टिभीको टिम आफैं काठमाडौं आर्इ सुनकलीको कथालाई समेटेर विशेष रिपोर्ट तयार पारेको हो ।
आइतबार फिफा टिभीको युट्युब च्यानलमा ‘मिट द हिमालयन मेसी’ शीर्षकमा उक्त भिडियो रिपोर्ट अपलोड गरिएको छ । १२ मिनेट लामो भिडियो रिपोर्टमा नेपाली राष्ट्रिय पुरुष र महिला फुटबल टिमसँगै सुनकलीले पनि स्थान पाएको छ । सुनकलीबारे झण्डै पाँच मिनेटको रिर्पोताज गरिएको छ।
नेपाली राष्ट्रिय टिमका प्रमुख प्रशिक्षक जापानी नागरिक कोजी ग्योतोकु, राष्ट्रिय टिमका स्टाइकर नवयुग श्रेष्ठ र राष्ट्रिय महिला टिमकी कप्तान अनु लामालाई समेटिएको छ ।
उक्त रिपोर्टमा १८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड जितिसकेको सुनकली डकुमेण्ट्रीका विभिन्न दृश्यहरु देखाइएको छ । ललितपुरको सेण्ट जेभियर्सका स्कुले बालवालिकाहरु उत्साहपूर्वक ‘सुनकली’ हेरिरहेको दृश्यलाई समेत महत्वका साथ फिफा टिभीले आफ्नो रिपोर्टमा राखेको छ ।
डकुमेण्ट्रीका निर्देशक भोजराज भाटले पनि फिफा टिभीलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘नेपालमा देखिने र नदेखिने दुई नेपाल छन्,’ भाटले फिफा टिभीसँग भनेका छन्, ‘म फोटोग्राफी उद्धेश्यका साथ मुगु गएको थिएँ । त्यतिबेला ३ हजार ५ मिटर उच्च ठाउँमा कुनै फिल्ड बिना फुटबल खेलिरहेको देखे ।’ उनले आफूले त्यो राम्रो कथा हुन सक्छ भन्ने लागेको बताउँदैं मुगुका किशोरीहरुको फुटबल प्यासनमाथि सुनकली डकुमेण्टी बनाएको पृष्ठभूमि बताएका छन् ।
८० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिबलहरुमा सहभागिता जनाइसकेको ‘सुनकली’ नेपालकै सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड जित्ने डकुमेण्ट्री हो । डकुमेन्ट्रीका तीन जना पात्रहरु यतिखेर काठमाडौंमा पूर्ण आवासीय छात्रवृतिमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
यसअघि फिफा टिभीले नेपाली फुटबलमाथि ‘नेपाल फुटबल स्टार्स किप डिम्स अलाइभ’ शीर्षकमा एक भिडियो रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान अनिल गुरुङ र राष्ट्रिय टिमका मिडफिल्डर राजु तामाङलाई फिचर गरिएको थियो।
पार्टी एकतामा यो हो माअ‍ोवादीको ‘फाइनल डिसिजन’
कालागाढबाट मुडभरातर्फ जाँदै गरेको जीप छाईपानीमा खस्यो, पाँच जनाको मृत्यु
खुमलटारबाट प्रचण्डले भनेः माधव नेपालले गर्दा टेन्सन भो !
लेनिनको जन्मजयन्तीका दिन प्रचण्डले जारी गरे यस्तो सन्देश
फेसबुकमा नक्कली अकाउन्टबाट हैरानी हुनुहुन्छ ? यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ नक्कली अकाउन्ट !
नेपाली ब्लु फिल्म खेलेका यी नायिकाहरु,जो यौन काण्डपछि अहिले गुमनाम छन् !हेर्नुहोस् भिडियो
यिनै हुन् नेपाली चेली अष्टमी गुरुङलाई बलात्कार गरि आत्महत्या गर्न बाध्य गराउने हत्यारा
ब्लू फिल्म खेल्न सुझाव पाएकी ज्योति मगरको यस्तो फिल्म सार्वजनिक
जनार्दन भन्छन्,- मेरा जनताले दु:ख पाउनु भएन, अब केही समस्या भए सिधा मन्त्रीलाई भन्न सक्ने
© 2017 : ChannelNp